Shaqaalaha Somaliland waxay ku Shaqeeyaan Xaalado shaqo oo ku xun Aadantinimada | Salaan Media
Shaqaalaha Somaliland waxay ku Shaqeeyaan Xaalado shaqo oo ku xun Aadantinimada
Published: 01/05/2013 @09:10
Shaqaalaha Somaliland waxay ku shaqeeyaan xaalado shaqo oo dhiilo leh. Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay codsanaysaa in looga faa’iidaysto xuska maalinta shaqaalaha aduunka in lagu baraarugo dhibaatooyinka waawayn ee haysta shaqaalaha Somaliland.
Xaaladaha shaqo ee goobo badan ayaaa ah kuwo liita oo ku xun aadantinimada. Hababka shaqaalaysiinta ayaa ah kuwo ku salaysan qabyaalad, afkaaro dimeeed, kala sooc lab iyo dhedig ah iyo takoorro kale taas oo ka soo horjeedda qodobka 7 ee Xeerka Shaqaalaha Rayidka ah.
Ma jiro xeer xadidaya mushaharka u hooseeya ee lagu shaqayn karo saacadii, sidaas darteed, loo shaqeeyayaashu waxay bixiyaan mushahar aad u liita oo aan u dhigmin shaqada ay qabtaan shaqaaluhu.
Dhibta u badan waxa geysta shirkadaha iyo ganacastada oo iyaga oo ka faa’iidaysanaya kormeer la’aant iyo xisbaabtan la’aan, caado ka dhigtay inay ku tuntaan xuquuqda shaqaalaha ayna ku tacadiyaan dadka u baahan shaqada. Waxa taas fududaysay shaqa la’aanta ba’an ee ka jirta dalka.
Eriga shaqaalaha ayaa ah isna mid baahay oo si ka soo horjeedda xeerka shaqalaaha loo sameeyo.
Shaqaale badan ayaa shaqeeya saacado ka badan 8da saacadood ee xeerka Shaqaalaha Rayidku dhigay, lamana siiyo lacag dheeraad ah (overtime payment), sida ay noo sheegeen shaqaale aanu warayasannay.
Waxa werwer aad u wayn leh caruurta yar yar ee la shaqaalaysiiyo, taas oo ka soo horjeedda qodobka 38 ee xeerka shaqaalaha. Haweenka ayaan la siin xuquuqdooda shaqo ee ay ka mid yihiin fasaxa dhalmada, iyo fasaxa naasnuujinta sida ku cad qodobada 15 iyo 16 ee Xeerka Shaqaalaha.
Xaruntu waxay ogaatay inay jiraan ganacsiyo aan fasixin shaqaalaha maalmaha fasaxa qaran ee qodobka 11(3) ee Xeerka Shaqaaluhu waajibiyay in la fasaxo shaqaalaha. Shirkadaha ganacsi qaarkood ayaa doorbida inaanay shaqaalaysiin haweenka.
Guud ahaan xuquuqaadka shaqo ee ay ka mid yihiin fasax sanadeedka, fasaxa bukaanka, xaqal ciidka, xaqsiinta iyo daawaynta ayaanay helin inta badan shaqaalaha Somaliland. Shaqaalaha Somaliland ma laha urur shaqaale, sidaadarteed, ma jirto cid xuquuqdooda u dooda. Qodobka 52 ee Xeerka Shaqaalaha Rayidka ahi wuxuu jideynayaa aasaasidda urur shaqaale.
Waxa si gaar ah u dulman shaqaalaha ajnebiga ah, gaar ahaan Ethiopian ka oo ku shaqeeya mushahar ka hooseeya ka muwaadiniinta.
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay soo jeedinay:
In shaqo bixiyayaashu ka waantoobaan hababka xeerarka ka soo horjeeda ee ay u maamulaan shaqaalaysiinta, shaqada iyo shaqaalaha
In Agaasinka Shaqada ee Wasaaradda Shaqada iyo Arimaha Bulshadu uu qaato doorka uu siiyay Xeerka Shaqalaaha Rayidka ah si loo ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha
In la abuuro urur waynaha shaqaalaha Somaliland
In la sameeyo wacyi gelin lagu ogaysiinayo shaqaalaha xuquuqdooda shaqo
In wax ka bedel lagu sameeyo Xeerka Shaqaalaha Rayidka ah
In la hawlgeliyo korrmeerayaasha shaqada si ay si joogto ah u kormeeraan, ganacsadayaasha iyo xaalladda shaqaalaha waddanka guud ahaan